Mamaklub - အပိုင်း 2
Trans fats - ဒါဘာလဲ။ Trans Fat ပါ ၀ င်သည့်နေရာ - ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း
Trans fats များသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီများ၌အပူပေးသည့်အခါကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံအများစုသည်အစားအစာအတွင်းရှိ trans trans fats များပါဝင်မှုကိုထိန်းညှိသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်ရှိအဆီစုစုပေါင်း၏ ၂% ထက်မပိုစေသင့်ပါ။ Trans trans fats များထိခိုက်မှုသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ နောက်ဆုံး၌သူတို့သည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်ပွားစေပြီးအဝလွန်ခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ဘာလဲ…
Trans fats - ဒါဘာလဲ။ Trans Fat ပါ ၀ င်သည့်နေရာ - ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း Read more »
Buttocks Exercises - အိမ်တွင်းထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အခါအိမ်၌သင့်လျော်သောထိရောက်သောခံနိုင်ရည်ရှိသော buttock လေ့ကျင့်ခန်းသည်အလုပ်တွင်ကြွက်သားများကိုသတိရှိရှိထိတွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ခြေထောက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြွက်သားများတစ်လျှောက်မျှတမှုရှိသည့်သဘောနှင့်ပေါင်းစည်းထားသည့်အလုပ်သဘောမျိုးဖြစ်ပေါ်လာရန်အရေးကြီးသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းနည်းစနစ်နှင့်လေ့ကျင့်မှုပုံမှန်ပြုလုပ်မှုနှစ်ခုလုံးမှပါ ၀ င်သည်။ အထီးကျန်ဆန်သောဘဝပုံစံသည်တင်ပါးအားအားနည်းစေသည်။
Buttocks Exercises - အိမ်တွင်းထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ် Read more »
နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အဆီ - ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရ? နှစ်ဖက်စလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း
နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပျော့ပျောင်းသောအရေပြားအောက်ရှိအဆီသည်တိုင့်၏အဓိကရန်သူဖြစ်ပြီးအထိုင်များသည့်ဘဝပုံစံ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများသန်မာစေရန်အတွက်နှလုံးနှင့်အိမ်လေ့ကျင့်ခန်းများပုံမှန်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်သာနှစ်ဖက်စလုံးမှအဆီကိုမောင်းနိုင်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးမှအဆီကိုတိုက်ဖျက်ရာ၌အထူးအရေးကြီးသည်မှာ gluteal ကြွက်သားများဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်သည်။
နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အဆီ - ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရ? နှစ်ဖက်စလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း Read more »
atBatat - အဲဒါဘာလဲ။ အာလူးမွှေး - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထိခိုက်မှု
အာလူးချိုသည်နှစ်ရှည်လီယာနာပင်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်အာလူး၏ဆွေမျိုးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အာလူးချိုတွင်သကြားနှင့်ရိုးရှင်းသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပိုမိုပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်ချိုသောအရသာရှိပြီး၎င်းကို“ အာလူးချိုင့်” ဟုမကြာခဏခေါ်ကြသည်။ ချိုသောအာလူးနှင့်အာလူးဖြူတို့၏အဓိကကွာခြားချက်မှာ ၄ င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အရသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ချက်ပြုတ်နေစဉ်အနည်းငယ်သာပြုတ်။ မုန်လာဥအရသာနှင့်တူသည်။ သူ့ ...
atBatat - အဲဒါဘာလဲ။ အာလူးမွှေး - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထိခိုက်မှု Read more »
မြေထဲပင်လယ်အစားအစာ - နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့်အခြေခံမူများနှင့်မီနူးများ
မြေထဲပင်လယ်အစားအစာသည်မှန်ကန်စွာစားရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစားအစာတွင်အဓိကအရာမှာတိရိစ္ဆာန်အဆီများကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီများနှင့်အစားထိုးခြင်းအပြင်နေ့စဉ်နှင့်ငါးနှင့်ပင်လယ်အစားအစာများဖြစ်သောအိုင်အိုဒင်းနှင့်အိုမီဂါ -၃ ရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။ သုတေသနက၎င်းသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်ဟုဆိုသည်။ အစားအစာကိုယ်တိုင်သည်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်မွှေးကြိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များအသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံသည် - အလယ်အလတ်ရှိသော ...
မြေထဲပင်လယ်အစားအစာ - နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့်အခြေခံမူများနှင့်မီနူးများ Read more »
တစ် ဦး ကဘိုဟိုက်ဒရိတ် - အခမဲ့အစားအသောက်မီနူးဖြစ်ပါတယ်။ Carbohydrate- အခမဲ့ထုတ်ကုန်များစာရင်း
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကင်းသောအစားအစာသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်သောကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်အထိရောက်ဆုံးသောအစားအစာဖြစ်သည်။ သငျသညျဘိုဟိုက်ဒရိတ်အစားအစာများကိုစားသုံးရန်ငြင်းဆန်လျှင်, ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ရရှိနိုင်အဆီသိုက်ကိုစတင်အသုံးပြုသည် ketone စစ်အစိုးရသို့သွားသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအရကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်မပါသောအစာသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကိုမတိုက်ပဲကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။ သို့သော်၊ မှတ်မိရန်အရေးကြီးသည်။
တစ် ဦး ကဘိုဟိုက်ဒရိတ် - အခမဲ့အစားအသောက်မီနူးဖြစ်ပါတယ်။ Carbohydrate- အခမဲ့ထုတ်ကုန်များစာရင်း Read more »
← လွန်ခဲ့သော 123 ... 348 နောက်တစ်နေ့ →